Indawo yokuhlala eSan Alberto yaseAndes - ¨LA HUELLA¨ - I-Airbnb
Indawo yokuhlala eSan Alberto yaseAndes - ¨LA HUELLA¨
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguOrnella
UOrnella ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Le ndlu intle yenziwa ngutata nentombi yakhe kudala, umbono ovela kwibalcony ukhethekile, uye ubone intaba emnyama abantu abathi inemo yomfazi okhulelweyo, abanye bayibiza ngokuba yintaba ukuchuma.
Ikhabhathi ikhethekile, hayi kwindawo eziyingqongileyo kuphela kodwa nangaphakathi, ihonjiswe ngamaqhekeza amadala efenitshala eqokelelwe ngononophelo ngumenzi wekhabhinethi...
Ilungele ababhali, abapeyinti okanye naluphi na uhlobo lwamagcisa angathanda ukuzoba kuwo onke amandla eentaba kwaye anikezele nje ukudala.
Kwakhona kubakhweli okanye abathandi bekhephu kuba indawo yokutyibiliza ekhephini ikufuphi kwaye kukho iinkqubo ezininzi zokuzonwabisa kwidolophu ekufutshane.
Inekhitshi elikhulu elinetafile kunye nezitulo ezininzi, kunye neebhedi ezimbini ecaleni kwe "salamandra" zokufudumala ngelixa ufunda incwadi. Ineefestile ezininzi kunye nokukhanya okuninzi emini.
Kukho igumbi lokuhlala elikhulu elineebhedi ezi-3 onokuzisebenzisa njengeebhedi ukuba awuzi neendwendwe ezininzi, ukuba uceba ukuhlala ixesha elide kwaye awuzifuni zonke iibhedi singazikhupha.
Emva koko kukho igumbi lokulala elinebhedi enkulu phezulu njengegumbi eliphezulu, eli gumbi lokulala linombono omhle wokuphuma kwelanga rhoqo kusasa kwaye xa ulala uya kuva isandi somlambo nje ecaleni kwakho ...
Eli gumbi lokulala likwakunika ukufikelela kwi-balcony apho unokonwabela isidlo sakho sakusasa ngelixa ujonge indawo enkulu eluhlaza ejikeleze ikhabhathi.
Le ndawo yayihlala izizwe zokuqala ezazikholelwa ukuba le ntaba ingcwele.
Ukusuka kwikhabhinethi ungahamba uye kumlambo oqukuqela phambi kwentaba kwaye ungafika emazantsi entaba apho uya kufumana "umthi oyedwa" omnye umthi ongaqondakaliyo ekukholelwa ukuba unamandla amaninzi. .
Okanye yiya kubona i-Inca Trail ekwasemva kwepropathi
Siya kuba lapho kuwe, u-Eugenia kunye noFede bahlala kwipropati, u-Eugenia ungumnini kunye nembongi emangalisayo eya kukugcwalisa ngolwazi olumangalisayo kunye nolwazi malunga nommandla kunye nazo zonke iintlobo zezinto :)